Königsdorf, Burgenland, i-Austria
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Astrid
I-Ganslhof iyindlu encane yasepulazini eningizimu yeBurgenland enobuciko obukhethekile. Ngesango lokungena elivamile lesifunda, ungena egcekeni elincane elingaphakathi, elikumema ukuba uhlale futhi uphumule. Uma ungena endaweni yokuhlala, wamukelwa yikhishi elithokomele lokudlela. Amakamelo amabili okulala kanye negumbi lokugezela lingafinyelelwa kusuka ekhishini-cum-igumbi lokuhlala.
Indlu ifakwe isitofu se-pellet, isitofu sezinkuni nokufudumeza kukagesi.
Uma kunesidingo, imoto ingaphinde ipakwe egcekeni, izindawo zokupaka ziyatholakala phambi kwendlu noma kunjalo.
Igceke elingaphakathi lingasetshenziswa futhi futhi litholakala ezivakashini ukuze balisebenzise kuphela.
Indawo enhle kakhulu eningizimu yeBurgenland maphakathi nonxantathu womngcele we-Austro-Hungarian-Slovenian futhi esemngceleni we-Southeast Styria engemuhle kangako yenza i-Königsdorf indawo ekahle yokuqala yokuhlola le ndawo enhle.
Noma ngabe impilo, ubuciko, umlando, ezokuzijabulisa noma ukudla okudliwayo - kukhona okuthile kwawo wonke umuntu kulesi sifunda.
Kunamabhavu amaningana ashisayo endaweni (i-Loipersorf, i-St. Gotthard, i-Stegersbach, i-Bad Blumau, i-Bad Waltersdorf, i-H20) kanye nelinye lamachibi okugeza amahle kakhulu kude nakude edolobhaneni ngokwalo.
Abathandi bewayini bazophinde babe nenjabulo yangempela eningizimu yeBurgenland naseStyria engumakhelwane.
Njengendawo yomngcele eyakha iYurophu amakhulu eminyaka, lesi sifunda sifana nencwadi yomlando evulekile nephilayo.
Indawo ongahlala kuyo, ukwazi, ujabulele futhi uphumule ................
Izivakashi zethu zingajabulela ukuhlala okungaphazamiseki nokunokuqonda, siyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo ngokushesha nakalula.
Hlola ezinye izinketho ezise- Königsdorf namaphethelo